Madaxweyne Siilaanyo oo Go’aankii kala Qaadista Doorashooyinka ka leexinaya Caqabada Sharci ee Hortaagan – Goobjoog News
Madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa codsi dib u eegis qaraar ah u gudbiyay maxkamadda Dastuuriga ah, kaas oo dhigaya in mar la wada qabto doorashooyinka madaxweynaha, madaxweyne ku xigeenka iyo tan wakiilallada mar qura.
Qaraarkan maxkamadda Dastuuriga ah ayaa ah caqabadda sharci ee hortaagan go’aankii madaxweyne Siilaanyo ee ku aadanaa kala qaadista doorashooyinka madaxtooyada iyo tan baarlamaanka iyadoo uu hadda doonayo inuu caqabadaana ugu dambeyn uu iska leexiyo.
Codsiga maxkamadda loo gudbiyay waxa uu u qornaa sidan:
Codsi dib-u-eegid Qaraarkii Fasiraada ee Maxkamadda Dastuuriga ah
1-in aan Doorashada Golaha Wakiillada lagu gali karin saamiga gobollada ee hadda jira.
2-in dib-u-eegis iyo dib-u-qaybin lagu sameeyo Saami-qaybsiga Kuraasta Golaha Wakiillada Jamhuuriyadda Somaliland ee Gobollada, iyadoo tixgelin wayn la siinayo deegaanada Awdal, Sool iyo Sanaag Bari.
3-in qiimayn iyo tixgelin lagu sameeyo saamiga kuraasta Golaha Wakiillada ay ku yeelan karaan Dumarka iyo Dadka laga tirada badan yahay.
4-in aan u magacaabo guddi qaran oo hawshan soo fududaysa ama isku soo duba-ridda talo sal balaadhan oo qancin karta dhinacyada kala duwan iyo daneeyayaasha sharci.
5-in la kala qaado Doorashooyinka Wakiillada iyo Madaxtooyada, si loo helo muddo ku filan hawlaha go’aanada sare ku xusan, iyadoo Doorashada Golaha Wakiillada dib loo dhigayo, halka Doorashada Madaxtooyada wakhtigeeda lagu qabanayo.
Halkan Hoose Guji:
go-aankii-maxkamadda-dastuurka-ee Caqabadda Ku ah Madaxweyne Siilaanyo